Ronaldo Luis Nazario de Lima Vana Vechiitiko Plus Untold Biography
musha Classic FOOTBALLER Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yebhokisi Nhamba Yemutambo uyo anozivikanwa zvikuru nezita reNickname; 'Fenomeno'. Yedu Ronaldo Luis Nazario de Lima Kuberekwa Nhoroondo pamwe ne Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Ngatitange.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwokutanga Muhupenyu
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ubwana Photo
Ronaldo Luis Nazario de Lima akaberekwa musi we 18th waSeptember 1976 muRio de Janeiro, Brazil nababa vake, Nelio Nazario de Lima, Snr uye amai, Sonia dos Santos Barata. Aiva mwana wechitatu wevakaroorana.
Ronaldo Luis Nazario de Lima akabva kumhuri yevarombo yakatsunga kumutumira kuchikoro. Akanga akazivikanwa semwana wechidiki mumakore ake achikura zvikuru munharaunda yevadzidzi. Kufambira mberi kwake uye kushanda kwakanaka kuchikoro zvakasvika pakuguma kwayo kusvikira panguva ye11 apo zvisingafanoonekwi zvakaitika. Vabereki vake, Nélio Nazário de Lima naSônia dos Santos Barata, vakaparadzaniswa uye vakafamba munzira dzavo dzakasiyana apo aingova 11 chete. Asina munhu anomutarisira, Ronaldo Luis Nazario de Lima aifanira kusiya chikoro. Senguva iyo, nzira chete yekuwana mari shoma yaive kutamba makwikwi ematambo emugwagwa. Akawana rudo mumutambo webhola mukutsvaga kurarama.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama uye Upenyu hweMhuri
Upenyu hwehukama hweRonaldo Luis Nazario deLima hwakapararira mugore re1997 paakasangana neBrazilian model uye actress Susana Werner uyo waakarumbidza kubva kune imwe yeBrazilian yakakurumbira sarura opera inonzi 'Malhacao'.
Ukama hwaRonaldo naSusana Werner
Chikumbiro chake chekuonekwa muzvikamu zvitatu chakabvumirwa. Vose vakawira murudo pavanosangana. Izvi zvakakonzera hukama hurefu kwenguva refu hwakagara kusvikira kutanga kwe1999.
Kuguma kwoukama humwe kwaireva kutanga kweumwe kune muchengeti anozviwana iye ari pamusoro pevarume vose vevarume vanoda nhamba. Gare gare gore iroro, Ronaldo akadanana newaimbova musikana wechikwata weBrazil Milene Domingues.
Ukama hwaRonaldo naMilene Domingues
Hazvina kutora nguva asati abata pamuviri. Paakacherechedza kuti akanga ane pamuviri, Ronaldo akamutora kune imwe nzvimbo. Vose vakaroora muna April, 1999. Pana 6th yaApril 1999, Milene akabereka mwanakomana waRonaldo wokutanga, Ronald muMilan.
Ronaldo naMilene, vachigamuchira mwana wavo
Imba yavo yakagara makore 4 mushure mezvo vakaparadzana.
Muna 2005, Ronaldo akabatanidzwa kuBrazil model uye MTV Star Daniela Cicarelli uyo akava nepamuviri asi akatora pamuviri.
Ukama hwavo hwakanga hupfupi. Yakatora mwedzi mitatu chete mushure mekunyanya kwechikwata chavo chechichato chinodhura ne £ 700,000.
Mugore iroro 2005, Ronaldo akaita a kuedza kwevabereki uye akazvisimbisa kuti ndiye baba vemukomana anonzi Alexander.
Uyu mukomana akaberekwa mushure mehukama hupfupi pakati paRonaldo naMichele Umezu, mudiki wekuBrazil uyo Ronaldo akatanga kusangana muTokyo, mu2002.
Scandal: MunaEpril 2008, Ronaldo aibatanidzwa mukunyadzisa kunosanganisira zvitatu travesti zvifeve vaakasangana naye mubhuclub iri muguta re Rio de Janeiro. Pavakaziva kuti vakanga vari mutemo, mukomana Ronaldo akavapa $ 600 kuti vaende. Mumwe wevatatu, iye zvino afa Andréia Albertini aida $ 30,000. Akazojekesa nyaya yacho kune vhidhiyo. Kuroorana kwake naMaria Beatriz kwakabviswa pakarepo mushure mekunyadziswa. Mushure mekujekeswa kukuru pamusoro penyaya, hukama hwavo hwakatanga zvakare. Panguva ino, rudo rwakapedza ivo.
Anobva aenda naye pachena uye akawana nyika yose kuziva kuti iye achange ari kutsvaga zvakare.
Ronaldo naMaria (Rudo rweHupenyu hwake)
Pana 24th December 2008, Maria Beatriz Antony akaberekera mwanasikana wavo wokutanga, Maria Sophia, muRio de Janeiro.
MunaApril 2009, mhuri yose yakatamira kune imwe itsva penthouse muSão Paulo. Pana 6 April 2010, Maria Beatriz Antony akabereka mwana wavo wechipiri, Maria Alice muSão Paulo. Nenguva yakazara, Maria Alice akazvarwa musi iwoyo, chaiyo makore 10 mushure mekunge mukoma wake mukuru Ronald aberekwa.
Mushure mekusimbiswa kwemwana wake wechina, Ronaldo akataura musi wa 6 December 2010 kuti akanga ane vasectomy, "kuvhara firini", vachifunga kuti kuva nevana vana zvakakwana.
Ronaldo Nazario de Lima uye Mhuri
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama neMwanakomana Wokutanga, Ronald.
Izvo zvakanaka kupfuura shamwari. Hapana kana kusava nechokwadi pamusoro pehukama hwavo. Hakuna humwe humwe humwe humwe humwe husina kubviswa pakati paRonaldo (baba) naRonald (Mwanakomana).
Kufanana nababa saBaba-Ronaldo naRonald
Ronald anowana zvakawanda kubva kuna baba vake kunyanya mukugadzirira kupa, kukura uye kutungamira.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -Kutanga Kutanga KuBhola
Kutanga kweRonaldo kutanga kwebhola
Pamwe chete mwedzi ye6 mushure mokunge atora bhora, Ronaldo Luis Nazario de Lima akazova mutariri wenguva dzose yematambo ematambo akarongeka munzvimbo yake. Akagamuchira rubatsiro rwakakwana kubva kune shamwari dzake nevavakidzani vaiziva zvirevo zvake uye vaida kuti afambire mberi nokukurumidza. Uku kutanga kwebhola kwebhola kwakatanga mumigwagwa yeBento Ribeiro, musha weRio De Janeiro. Yakanga iriwo nzvimbo iyo kukwira kwake kunoshamisa kuchikwira kumusoro kwebhola yenyika.
Ronaldo akashandisa mikana yose yaakapiwa kuti aratidze unyanzvi hwake hwekuvandudza mumugwagwa. Basa rake rakaoma rakabhadharwa sezvaaiparadzirwa nechemberi yeBrazil Jairzinho uyo panguva iyoyo aiva mudzidzisi webhola uye scout. Paaipupura zvaaikwanisa, Jairzino akarayira panguva iyoyo 16 wegore rekare kune rimwe raimbova kambani Cruzeiro.
Mumutambo wake wekutanga nekambani, Ronaldo akaputsa rekodhi nekuisa zvinangwa zvinoshamisa zve 44 mumitambo ye44. Kuwedzereka kwake kwechimbichimbi, simba rehutano hwemuviri uye kugadzirisa kwakadzika pamwe netsika yakakonzera dzose pundits yebhola uye vateveri. Basa rake rakaramba richibatsira chikwata kuhutano hwekutanga hweBrazil Cup mu1993. Pane imwe nguva, munhu wose akatanga kumudana kuti 'New Pele ' tichionga chikwata chake chebhora chinofanana nechaPele paakatanga panguva imwecheteyo mu1958. Zvakatora nguva shomanana Ronaldo asati awana mukurumbira mukuru wenyika panguva yechidiki che 17.
Moreso, kushanda kwake kwakamupa tikiti yekutsvaga kune kapu yepasi ye 1994 yakaitirwa muUnited States. Kunyange zvazvo akatarisa makwikwi kubva kubhenji sezvo vanhu vomunyika yavo vakakunda Cup.
Nokukurumidza zvakakwana, shoko raTanaldo rakakura rakatararira kumahombekombe eEurope nekuda kwekuiswa kwake muBrazil muChina yeChina Cup Cup, uye pakupedzisira akazotsvaga nePiet De Visser mukuru, akadzoka seimwe yevashandi vakanakisisa mubhola rainge rave rawana Ronaldo compatriot Romário.
Basa rake panzvimbo yepamunharaunda rakamukunda kuti atore kune PSV Eindhoven mushure meNdebe yeNyika.
Ronaldo akabvuma nokuti yaiva tsika yevatambi vaibva kuBrazil vaida kuenda kuHolland kana kuFrance kuti vadzidze mutambo weEuropeya vasati vatama. Ronaldo akarova pasi iyo inosvika apo chibvumirano chake chakatengeswa ku PSV Eindhoven muNetherlands mu1994, zvichienderana nechinangwa chega yega mutsara nepamusoro pekukwikwidza kweEuropean.
Akapedza nguva mbiri paPVV Eindhoven kuverenga 54 zvinangwa mumitambo ye57.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -Gore risingakanganwiki 1996
Yaiva yezhizha ye1996. Gore rakapera zvinhu zvakawanda. Gore gore Michael Michaelson akakunda goridhe mbiri paAtlanta Olympic. Gore gore reEngland rakange rasvika uye rakasvika kusvika pakupedzisira kweEuropean Championships. Gore gore matambudziko mashanu ekutambudzika anonzi The Spice Girls akangotiudza zvavaida, zvavaida chaizvoizvo. Gore gore Hotmail yakanga ichangobva kuumbwa. Gore gore re Fugees vakatiuraya isu zvishoma nerwiyo urwo. Gore rimwe gore Nelson Mandela akanga achidzika semutungamiri weSouth Africa. Gore gore Mutungamiri Charles naChristine Diana vakanga vachinyora mapepa okurambana.
kwaiva negore zita rokuti Ronaldo Luis Nazario de Lima rakava zita reimba rakaonekwa pasi rose. Iri ndiro gore reBarcelona rakabvuta mwana wechikwere ane makore ane gumi nemana (Ronaldo Luis Nazario de Lima) kubva PSV Eindhoven uyo aigona kugovera zvinangwa zvokuseka.
Yaiva panguva ino iyo Sir Bobby Robson uye Jose Mourinho akashanda naRonaldo semutungamiri weBarcelona uye mutariri anobatsira.
Iwe Ronaldo unongogara chete neBarcelona kwenguva imwe chete, asi wakava nemigumisiro inofadza munguva yake nekambani.
Ronaldo anotungamirira boka iri kuEFAFA Cup Winners 'Cup uye Copa del Rey kubwinya.
Iwe aizongogara chete neBarcelona kwekanguva imwe chete, asi aive nemigumisiro inofadza munguva yake nekambani. Akatora 47 zvinangwa mumitambo ye49 uye akazovawo mutambi wechidiki kudarika rimwechete akakunda FIFA pasi rose mutsigiri wegore remubairo, nhoroondo yakatarwa kusvika zvino.
Pazera remakore 20, Ronaldo akanga achiratidza chimiro chekupedzisa nyika yakanga isati yamboona.
Mumashoko ake ... "Ndinoda kuvepa zvinangwa mushure mokupfuura vose vanodzivirira pamwe chete nomurindi. Icho hachizi kukosha kwangu, asi tsika yangu. " - Ronaldo.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -The Inter Milan Call
Mari yakanga ichitanga kutaura mubhola mumwaka 1998. Gore iroro, Barcelona yakagamuchira zvekare nyika yakadha ye £ 18 mamiriyoni kubva Inter Milan kuRonaldo.
Hazvina kumbobvira chichidzokera shure kubva kune dambudziko, Ronaldo akaendesa kune maGiantali makuru. Nguva yake yekutanga yakange yakajeka yezvakange zvasvike nyika kubva kune iyo nyanzvi mutsva - 34 dzimwe zvinangwa zvakazotevera, uye mamwe marekodhi akaparara.
Ronaldo akava mutevedzeri wokutanga wekudzokera shure kumushure weFIFA World Player weChipiri, uyewo achitaura neBonon D'or.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -The 1998 World Cup Finals
Sezvo kusvika pakupedzisira kweNdebe yeNyika, iyo yakadhindwa mu1998 pakati peBrazil neFrance yakanga isingave yakanyora script. Kunyange zvazvo Brazil yakanga iri kutarisira kudzivirira korona yavakakunda mu1994, France yakanga iri kutamba pamba, ichida kutora chikoro cheGolding kokutanga. Mutambo wacho wakaonawo nheyo mbiri dzinotora, mumwe naZinedine Zidane achifukidzira Brazilian Ronaldo, uyo pachake akabatanidzwa mukukakavara kunoshamisa kwakasiya vateveri vake vose vakavhiringidzika.
Funga izvi- Ronaldo, mukomana weBrazil wegoridhe, uyo aitarisira kutungamira rutivi neFrance akadzoka akarwara maawa mashomanana musati mutsara uyu.
Iyi nhoroondo yakakurumidza kugadzirisa nyaya itsva dzakatarisana nemuvengi wacho. Zvimwe zvikonzero zvaive zvichibudiswa, zvichibva pakudya kune chekuita kune zvinetso zvemunhu muhupenyu hwake hworudo. Pakupedzisira, chokwadi chekutsvaira chakave chiratidzwawo nechiremba weBrazilian team Lidio Toledo: Ronaldo akanga amhanyira kuchipatara mushure mokutambura kunetseka paanovata usiku huno husati hwapera.
Akaderedzwa kubva muboka rekutanga ndokusunungukira kuchipatara kuti aite kudzoka kunoshamisa kumaminitsi emutambo vasati vabuda.
Zvisinei pane imwezve yakakanganiswa munyaya. Panzvimbo yekutsvaga mauto kuBrazil kuKubwinya kweNyika, Ronaldo akange asingakwanisi kubvisa kurwara kwake uye pasi pekushanda kubva kumutsotsi akabvumira mumwe Zinedine Zidane kutora kaviri kutungamira France kuenda kune imwe mukurumbira we3-0 pamusoro peBrazil.
"Takarasika Cup Cup asi ndakakunda imwe kapu - hupenyu hwangu" - Ronaldo (pamusoro peChitatu Yenyika Yenyika 1998)
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -The Injury Story
Vakawanda vangave vakakwikwidza vhesi vepamberi vave nebasa rekukuvadza. Michael Owen, mumwe munhu aimbove achitya nokuda kwemheni yake, akatarisana nekukuvadzwa kwakafanana saRonaldo uye aisagona kudzoka kuti ave hafu yemutambo waimbova. Paul Gascoigne, Tiger Woods, Joe Cole, Gary Neville uye vamwe vatambi vakawanda vane mabasa ekupedzisira ekukuvara uye havakwanise kudzokera kumhando yavo yakanaka.
Pane mutsara wakaonda unoparadzanisa mukuru, kubva kune vamwe. Icho chinhu chakasimba basa rakaoma kuti rive rakanakisisa. Chii chakaoma? Kuti uve wakanakisisa, kuwa, kunyorerwa uye wozomuka kuti uve wakanakisisa zvakare. Uyu ndiRonaldo Luis Nazario de Lima nyaya yekukuvara.
1998 WORLD CUP INJURY AND COMACK-Iye akakuvadzwa mukukwikwidzana nemuchengeti weFrance, Barthez muikombe chenyika ye1998.
Akazozvitsivira kuna Barthez, uyo akanga apindira ndokumukuvadza mumukombe wenyika ye 98, ane chibvumirano chinoshamisa chichienda kuManchester United icho chakamubvumira kuti agare kubva kune Old Trafford akatendeka.
I1999 / 2000 INJURY uye INOBVA- MunaNovember 21st 1999, njodzi yakarova zvakare, sezvo Ronaldo akaputika nemabvi achitamba muSerie A kupikisana neLecce.
Mushure mekuvhiyiwa uye mwedzi ye5 yekuvandudzwa, vaBrazilian vakaita kudzoka kwavo muCoppa Italia pakupedzisira kurwisana naLazio, asi tariro ipi neipi yekudzoka kwemafaireta yakaputsika mushure mokunge atambura kechipiri, kukuvadzwa kwakanyanya kumabvi mamwechete mushure memaminitsi 7 chete mumunda . Akatakurirwa kunze nemuchengeti.
Akanga asingakwanisi kutambazve kusvikira pakupera kwegore ra 2001 / 2002. Nokureva, akanga ari kunze kwegore. Akangozviratidza pamitambo gumi nematanhatu ndokutora chete 7 zvinangwa zve Inter iyo nguva.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -Post Inter Milan Era
Mushure mokunge vadzoka, Ronaldo akaita zvakakwana kukurudzira mutungamiri weBrazil Luiz Felipe Scolari kuti amubatanidze mumusasa wekambani ye2002 World Cup muJapan / Korea. Sezvo akashandura mutsara wake kuti atsigire kuvimba kwake nekukurumidza uye kugona, Ronaldo akanga ari mutambi akasiyana mune nguva yake yekukuvadza. Akavimba zvakanyanya pamusoro pesimba uye akavandudza ziso kune chinangwa. Izvo zvaakawana kuburikidza nekuziva. Akafumura nzira yake itsva yekutamba kunoparadza-kutungamirira Brazil kusvika pakupedzisira zvakare uye kuratidzira neGermany. Zvose zvekutanga kutambisa hurukuro dzakanyanya ku Ronaldo kukurira madhimoni ake kubva ku1998 - uye akavakunda ivo akaita.
IBrazil yakafumura chimiro chake chitsva muikombe chenyika ye2002 kuti iparadze iyo yakatungamirira kuBrazil kune imwe mukombe yenyika yekupedzisira uye yakawana 2 zvinangwa. Akatora 8 vavariro mumutambo uye akakunda MVP. Akakundawo Fifa nyika yemutambo uye Laureus adzoka mugore remubairo gore iroro.
Basa rake rakamupa rimwe rekubhadhara rekodzero yenyika, panguva ino € 39 mamiriyoni, sezvo Real Madrid yakamutsvakira mukuramba kwavo kuwedzera kweGalacticos. Pasinei nekuchengetedzwa kusvikira pakati pegore raOctober, vatevedzeri veMal Madrid vakagamuchira Ronaldo nekutambira ma heroes - vachiimba zita rake mumisambo iye asina kumbopinda uye kuputsa zvinyorwa zvekutengesa kwekutengesa. Achiita zvaaimbogara achiita zvakanakisisa, Ronaldo akaonga vateki pamwe ne 2 vavariro paakatanga. Akaramba achipa 30 zvinangwa munzira yekukunda La Liga neMadrid.
Pasinei nekukuvara kwekukuvara, Ronaldo aizoenderera mberi kugovera zvinangwa zve 104 mumitambo ye184 yeMadrid pamakore emakore 5 pachikwata.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -Post Madrid Era (Injury Crisis uye Comeback)
Ronado akazonyadziswa nemutungamiri weMadrid Fabio Capello mu2006, uye shure kwekusainirwa kwaRuud Van Nistelrooy kubva kuManchester United, mazuva ake kuBernabeu akaverengwa.
Musi waJanuary 27th 2007, Ronaldo akanyorera AC Milan mune chimwe chikwereti chinokosha € 7.5 mamiriyoni.
Musi waFebruary 13th 2008, mune imwe nhepfenyuro yakatarisana neLiforno, Ronaldo akabatwa mumunda mushure mekutambura kwegumbo rakaputika mushure mushure mekuedza kusina mhosva kukunda bhora.
Yaiva nguva yechitatu Ronaldo akatambura zvakadai, uye kunyange iyo yakakurumbira Milan Fitness Lab yakanga iine tariro yakawanda yekuti aizodzokazve - Milan haina kudzorera chibvumirano chake pakupera kwemwaka wacho pasinei nekucherechedza 8 zvinangwa mumitambo ye20.
Maererano naRonaldo, "Hupenyu hwangu hwave huri huwandu hwematambudziko uye ini ndakagadzikana mupfungwa, asi iyi ndiyo dambudziko guru muupenyu hwangu." - Ronaldo
Kunze kwechiito kwegore, Ronaldo akapikira kuratidza kuti munhu wose haana kukanganisa uye anodzoka kubva mukukuvara kwake kwechitatu kunotyisa. Kudzokera kunyika yekumusha kwake kwakaona chiratidzo chikuru chevaKorinde, kwaakagamuchira heroes kugamuchira paakazarura.
Pasinei nekutarisa kwemwedzi ye13, Ronaldo akazvibatsira kune zvigaro zve 30 muzviratidzo zve 55, achibatsira boka rake kuti riite sangano uye mukombe kaviri. Pakanga panewo mitsva yakagadzirirwa kuti iye adzoserwe kuBrazil squad zvakare zvakare muZimbabwe Cup 2010. Izvi hazvina kubudirira.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -Kutarisira Ikupedzisira YeNdebe Yenyika
Ronaldo akabatwa mumukombe wenyika ye2006 pasinei nekusava nechokwadi kumutswa pamusoro pemafungiro ake uye kuoma kwake. Akapedzisa kuputsa rerekari yaGerd Muller uye akazova nguva yose yenyika yepamusoro muchengeti ne 15 zvinangwa.
Akaita izvi chete, nechinangwa chekutengeserana neGhana musi waJune 27th, achibata chinangwa chake che 15th mumutambo wekupedzisira we World Cup. Brazil yaizoenderera mberi ichibviswa neFrance mumagumo ekupedzisira.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -Kutarisana neUkurema Matambudziko
Ronaldo, akanetseka nekuwana kuwandisa kwakanyanya mune chikamu chekupedzisira chebasa rake.
Kuongororwa kwechiremba kwakaratidza kuti ane hypothyroidism - chirwere chinokanganisa muviri wemetabolism.
Maererano naRonaldo, "Pamusoro pekuongororwa kwezvokurapa, ndakaona kuti ndakatambura nekunyunyuta kunonzi hypothyroidism, iyo inotadzisa simba remasabolism, uye kuti iitungamirire ini ndinofanira kutora mamwe mahomoni asingabvumirwi mubholayo nekuda kwe-anti-doping (mitemo). Ndinotya basa rangu rava pedyo nekuguma kwayo. "
Ronaldo akapikira vateveri vake kuti varambe vachirwisana nemutoro wake. Iwe, Haana kumbovapa chero kuvimbiswa. Pane imwe nguva, zvakasvika kuvanhu vose kuti tariro yose yakarashika mushure mekutambudzika kukuru.
Haana kumboshanda zvakasimba zvakakwana kuti apinde muhupenyu zvakare.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -Achizivisa kusarura kwake
Vatatu venguva yeFIFA munyika yose yeRalaldo vakataura nezvekubvisa kwake kubva kumutambo kune mumwe musi weMuvhuro mune izvo zvakanzi musangano wepfungwa huru uyo ​​wakagumisa kuguma kwebasa rake re 18. Ronaldo akazozivisa kupera kwake muna February 2011.
Maererano neRonaldo- "Basa rangu rakanga rakanaka uye rakanaka. Ndakakundwa kakawanda asi ndisingagumi kukunda. Zvakaoma kusiya chimwe chinhu chakaita kuti ndifare kwazvo. Mentally, ndaida kupfuurira, asi ndinofanira kubvuma kuti ndakarasika iyo hondo kumuviri wangu. "
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -Nyika isina kururama (Kuenzanisa naye naCristiano Ronaldo)
Chinhu chokutanga chinouya mupfungwa dzedu apo mumwe munhu anotaura nezita rokuti Ronaldo ndiCristiano Ronaldo, Cr7, Cr9. Luis Nazario De Lima Ronaldo kazhinji anonzi, 'Fat Ronaldo', 'Mota (mafuta) Ronaldo', 'Mottai (mhanza) Ronaldo', 'Mvere dzisina kunaka dzinoparadza ronaldo', 'Rumwe Ronaldo'.
Vavengi vakawanda veRonaldo de Lima vanonzwa vachirwadziwa mwoyo kana mumwe munhu akafanana naye akadzikira kusvika pamatunhu akaderera uye haarangarirwi pane zvaakawana, asi kuti anoyerera zvakadini kana kuti vhudzi rake. Ichi ndicho chimwe chikonzero nei LifeBogger yakasarudza kutora nguva uye kunyora pamusoro pemutambi uyo angangodaro ari kukurudzira kukuru kune vateereri.
Iye zvino tinokubvunza iwe, iwe uchayeuka Ronaldo nokuda kwekurema kwake, kana kuti nokuda kwekutsvaga kwekutsvaga kwekutsvaga? Uchayeuka here nokuda kwezvaakaita kune vhudzi rake kana zvaaigona kuita nemakumbo ake?
Nguva inouya apo mumwe munhu anoti Ronaldo, iwe uchafunga nezvemubati wechiPutukezi uyo akakunda muFifa muchengeti wekomborero kamwechete kana Brazilian uyo akahwina katatu ?. "Drop your comment below on this after reading this article".
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts -LifeBogger Rankings
Zvave zvakanyorwa nguva isati yasvika katatu kakatova mubasa rake, iwe zvino unoziva kuti anofara mukuratidza kuti vanosava nechokwadi havana kunaka. MuRonaldo, tine mutambi uyo akamanikidzwa kudzorera zvachose mutambo wake katatu wakakuvadzwa nekuda kwekuwedzera kwemakore anopfuura 36. Izvi ndizvo zvatinofunga nezvake mumatunhu edu pasi apa.
Yakagadziridzwa Iphone 5C May 23, 2018 Pa 9: 13 am
Nzira yako yekuudza zvinhu zvose muchikamu ichi chekunyora ichokwadi fastidious, vose vanogona
zve nyore nyore kuziva, rumbidzai zvakawanda.
David Araniva June 24, 2018 Pa 8: 49 am
Izvo zvinonakidza chaizvo. Ndakatenda kuverenga nyaya yako. Ronaldo achiri munhu mukuru. Ndatenda kugovera nyaya yake.
Yh nabil Gumiguru 5, 2018 Pa 10: 50 pm
Cr9 yaiva bhomba rakasimba uye iwe chaizvoizvo nokuda kwegadget iyi uye tinofara nayo
Adriano Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts